CDMA 800 ဖုန်းတွေ အမြန်နှုန်းဘယ်လောက်ရကြလဲ — MYSTERY ZILLION
CDMA 800 ဖုန်းတွေ အမြန်နှုန်းဘယ်လောက်ရကြလဲ
April 2011 edited April 2011 in Other
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ CDMA တွေအမြန်နှုန်းဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ
ကျွန်တော့့်ဟာတော့ အမြန်ဆုံး 8kbps ပဲရတော့တယ်
April 2011 edited April 2011 Registered Users
၃.၁ Mbps တော့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာဆိုဒ် ဖွင့်ဖွင့် မတက်တာက များတယ်။ သုံးစားမရတဲ့ ရတနာပုံတော့ တက်တယ်။
CDMA800 ဖုန်းနဲ့သုံးရင်Download 64 kilobits/second (=8kilobyte/second) ဘဲရတယ်။ Upload ကတော့ တော်တော်ကောင်းတယ် (1 megabits/second) နားပတ်ချာလည်လောက်ရတယ်။ ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး။ လုပ်ချင်လို့ လုပ်တာနေမှာပေါ့။ တခြား McWill တို့ SkyNet တို့ ရောင်းကောင်းအောင် CDMA800 ကို နှေးထားတယ်လို့ ထင်တာဘဲ။ သေချာတာကတော့ လုပ်ချင်သလို လုပ်နေတာပါဘဲ။
i got download speed 7-8kbs/sec by IDM.
ဟုတ်ပါတယ်။ 8-9 KBps လောက်ပဲရတာပါ။
transfer rate က 8.556kb/s ကို​မကျော်​ဘူး
တစ်​ခါ​တစ်​လေ​တော့ 30kb/s ရောက်​သွား​တယ် ဘယ်လောက်​မှ​မ​ကြာ​ပါ​ဘူး
How about this bros! Down link sometimes reach to 25 kbps.
Now downlink is limited to stay below 20 kbps, it is better than last time limit, 10 kbps.
I agree, now I also got maximum 16.KB/s. Just wishing to be better..
I got 8.5kb/s
I really feel like you
ကျွန်တော်အိပ်မက်များ မက်နေလားဗျ။ 10/6/11 1:41AM မှာဗျာ။
ဒါတောင် brower က အလုပ်ရှုပ်နေသေးလို့... အလုပ်မလုပ်ခင်က ဒေါင်းလုဒ်ချည်းပဲကို 15KB/s ကျော်နေတယ်။
ကြည့်ပါဦးဗျာ... ကျွန်တော်များ မျက်စိမှားသလားလို့...
and i hope better...........
Sometimes, I got 18-20kbs.
I get 15~20kb/s in midnight (12:00)
<center><img src="http://i1131.photobucket.com/albums/m556/winmyotun/Mysteryzillion/Bandwidth.jpg"></center>16 Kilobytes per second ( 128 kb/s)
<br><hr width="100%" size="2"><center>
</center><hr width="100%" size="2">
September 2011 Registered Users
In this time, if you got around 8kbyte/s in stable..., you are very good luck person.hahaha :-D